အသကျကိုရငျးကာ ကောကျငငျရယူနရေတဲ့ “ပနျး” မဟုတျတဲ့ “Gun” – Myanmar Media
အသကျကိုရငျးကာ ကောကျငငျရယူနရေတဲ့ ပနျးမဟုတျတဲ့ Gun (Photo Essay)
ကယား၊ ဇနျနဝါရီ ၁၂
ဖျောပွပါပုံမှာ ကရငျနီပွညျနယျတိုကျပှဲတဈခုအတှငျး သဆေုံးနတေဲ့အကွမျးဖကျစဈအုပျစုတပျသားတဈဦးရဲ့ လကျနကျခဲယမျးမြားကို ရရှိရေးအတှကျ ကောကျယူရနျစောငျ့ဆိုငျးနတေဲ့ KNDF B-02 ရဲဘျောတခြို့ကိုတှရေ့တာဖွဈတယျလို့ ထိုအဖှဲ့က ထုတျပွနျလာပါတယျ။
အကွမျးဖကျစဈအာဏာရှငျကို တျောလှနျနကွေတဲ့ ရဲဘျောတိုငျးမှာ လကျနကျလိုအပျခကျြရှိတာကွောငျ့ အကွမျးဖကျစဈထိုးလာတဲ့ စဈကောငျစီတပျသားတှသေဆေုံးတိုငျး သူတို့ရဲ့လကျနကျတှသေိမျးယူရရှိရေးဟာ လိုအပျခကျြတဈခုသဖှယျဖွဈနပေမေယျ့ အသကျတှရေငျးနှီးပေးဆပျခဲ့ရတာတော့ အလှယျတကူမသိမွငျနိုငျပါဘူးလို့လညျး ဆိုထားပါတယျ။
ဒါဟာလညျးလှယျကူတဲ့ဖွဈစဥျတော့မဟုတျတဲ့အတှကျ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီတပျသားတှသေဆေုံးလို့ လကျနကျလုကောကျရငျး မကဆြုံးသငျ့ဘဲ ကဆြုံးခဲ့ရတဲ့ ရဲဘျောမြားလညျး ရှိခဲ့တယျလို့လညျး ထုတျပွနျခကျြဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါကိုလညျး KNDF B-02 တပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးက ခုလိုပွောဆိုထားပါသေးတယျ “ဒီပုံကိုသခြောလေးကွညျ့ပါ။ကြှနျတျောတို့ ရဲဘျောစလုပျတော့ လူအငျအားအမြားကွီးရှိပမေဲ့ တုတျ(တိုရှညျ)အနညျးငယျသာရှိပါတယျ။ အဲ့တော့ ရဲဘျောစလုပျကတညျးက ကြှနျတျောတို့ရဲဘျောတှဟော ကိုယျပိုငျသနေတျ သိပျလိုခငျြကွပါတယျ။
စခ တှကေို . .တျ ပွီးရငျ တုတျကိုလုကောကျကွတာပေါ့။ကရငျနီပွညျမှာ တုတျ(တိုရှညျ)ကိုရအောငျလုကောကျရငျး ကဆြုံးသှားရတဲ့ မပေးဆပျသငျ့ဘဲ ပေးဆပျလိုကျရတဲ့ ရဲဘျောတှမေနညျးပါဘူး´´ လို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။
ယခုဖျောပွထားတဲ့ပုံမှာတော့ ထိတှတေို့ကျပှဲတဈခုအတှငျး သဆေုံးနတေဲ့ စကစတပျသားတဈဦးရဲ့ ရုပျအလောငျးကိုတှရေ့တဲ့အပွငျ ရုပျအလောငျးဘေးက ပိုငျရှငျမဲ့နတေဲ့ သနေတျကိုကောကျယူဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ရဲဘျောတခြို့ကိုလညျးတှနေို့ငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တဈဖကျမှာဆိုရငျ သနေတျလာကောကျပါက ပဈခတျတိုကျခိုကျဖို့ခြိနျရှယျထားတဲ့ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီတပျသားတှရှေိနတေဲ့ အနအေခွအေနမြေိုးဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
KNDF B – 02 ရဲ့ ဇနျနဝါရီ ၁၁ ရကျညပိုငျးမှာ ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ထိုရုပျသဓောတျပုံတဈပုံမှာ စကားလုံးတှေ မပါပမေယျ့လညျး Burma VJ စာဖတျပရိတျသတျမြား ပွနျလညျခံစားနိုငျဖို့ရာ Photo Essay အဖွဈ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဓာတျပုံ – KNDF B-02
အသက်ကိုရင်းကာ ကောက်ငင်ရယူနေရတဲ့ ပန်းမဟုတ်တဲ့ Gun (Photo Essay)
ကယား၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂
ဖော်ပြပါပုံမှာ ကရင်နီပြည်နယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုအတွင်း သေဆုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတပ်သားတစ်ဦးရဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းများကို ရရှိရေးအတွက် ကောက်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ KNDF B-02 ရဲဘော်တချို့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ထိုအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေကြတဲ့ ရဲဘော်တိုင်းမှာ လက်နက်လိုအပ်ချက်ရှိတာကြောင့် အကြမ်းဖက်စစ်ထိုးလာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေသေဆုံးတိုင်း သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေသိမ်းယူရရှိရေးဟာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေပေမယ့် အသက်တွေရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရတာတော့ အလွယ်တကူမသိမြင်နိုင်ပါဘူးလို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
ဒါဟာလည်းလွယ်ကူတဲ့ဖြစ်စဉ်တော့မဟုတ်တဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေသေဆုံးလို့ လက်နက်လုကောက်ရင်း မကျဆုံးသင့်ဘဲ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်များလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကိုလည်း KNDF B-02 တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ခုလိုပြောဆိုထားပါသေးတယ် “ဒီပုံကိုသေချာလေးကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်စလုပ်တော့ လူအင်အားအများကြီးရှိပေမဲ့ တုတ်(တိုရှည်)အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ ရဲဘော်စလုပ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာ ကိုယ်ပိုင်သေနတ် သိပ်လိုချင်ကြပါတယ်။
စခ တွေကို . .တ် ပြီးရင် တုတ်ကိုလုကောက်ကြတာပေါ့။ကရင်နီပြည်မှာ တုတ်(တိုရှည်)ကိုရအောင်လုကောက်ရင်း ကျဆုံးသွားရတဲ့ မပေးဆပ်သင့်ဘဲ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ ရဲဘော်တွေမနည်းပါဘူး´´ လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားတဲ့ပုံမှာတော့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲတစ်ခုအတွင်း သေဆုံးနေတဲ့ စကစတပ်သားတစ်ဦးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့အပြင် ရုပ်အလောင်းဘေးက ပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့ သေနတ်ကိုကောက်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်မှာဆိုရင် သေနတ်လာကောက်ပါက ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေတဲ့ အနေအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
KNDF B – 02 ရဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ထိုရုပ်သေဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာ စကားလုံးတွေ မပါပေမယ့်လည်း Burma VJ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ ပြန်လည်ခံစားနိုင်ဖို့ရာ Photo Essay အဖြစ် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – KNDF B-02
Tagsအသကျကိုရငျးကာ ကောကျငငျရယူနရေတဲ့ "ပနျး" မဟုတျတဲ့ "Gun"
လှတျမွောကျ နယျမွမှော နထေိုငျ စားသောကျရတဲ့ အခွအေနေ တှကေို အားလုံးသိစဖေို့ သူမရဲ့ ပုံလေး တခြို့ တငျပေးလာတဲ့ ထား ထကျထကျ